Starbucks, Co nwere ike ịme mmekọrịta ọha na eze | Martech Zone
Ana m adọta kaadị mgbasa ozi na-anaghị atụ ụjọ mgbe m nwere. Onwe m, dị ka onye nwe azụmaahịa, ụjọ na-atụ m mgbe ọ bụla m hụrụ onye ahịa n'ihu ọha pịa ụlọ ọrụ na ntanetị. Karịsịa mgbe ọ bụ iwu na ọ bụghị ụta maka ndị ahịa na-ahụ maka ndị ahịa. Ndị CSR anaghị eme iwu, ọ bụkarị onye dị elu karịa na ọfụma na-ejikwa ihe ndị ahụ.
Na nke a, agbanyeghị, m ga-ekerịta ihe a mere n'ihu ọha n'ihi na ọ na-arụtụ aka n'ọtụtụ okwu ọtụtụ ụlọ ọrụ na-alụ ọgụ ma a bịa na mgbasa ozi mmekọrịta. Nakwa, ọ bụghị ụlọ ọrụ ọ bụla… ọ bụ akara siri ike na oke uru ugboro abụọ azụmaahịa. Nke ahụ pụtara na ha nwere ike ịge ntị, ma nwee ike idozi okwu a iji meziwanye mmekọrịta ha na mmekọrịta mmadụ na ibe ha.
Ihe ọghọm ahụ
Na ngwụcha izu a, emere m njem laghachi Florida na Indiana. Ọ bụ njem nke m na-ewere nkeji nke ọ bụla ma enwere m ọ driveụ dị jụụ, ebe ndị mara mma, na oge iji chee banyere ihe. Adị m onye na-anụ ọkụ kọfị (Starbucks nwere ike ịtụ ụjọ ma ọ bụrụ na ha ahụ mmefu ego anyị na-eme kwa afọ maka obere ụlọ ọrụ anyị na kaadị Starbuck anyị) ma na-ahazi nkwụsị m na akara ebe Starbucks na-apụ apụ.
Na McDonough, GA, m hapụrụ I-75 ma gbaa ụgbọala ole na ole gaa Starbucks. Mgbe m banyere n’ụlọ ahịa ahụ, abanyere m n’ụlọ ụmụ nwoke ahụ, ibobo wụrụ m n’ahụ́. Ihe mkpofu ahụ na-erubiga ókè ma kpuchie ala ahụ. Agaghị m akọwa senti ahụ, naanị na ọ doro anya na ọ gafeela. Ọ bụghị na anaghị m atụ anya ụlọ ịsa ahụ dị nso n'okporo ụzọ awara awara na-enweghị ntụpọ… mana nke a abụghị ọdụ ọdụ mmanụ, ọ bụ onye m hụrụ n'anya Starbucks.
Eguzo m n'ahịrị ma na-ele otu barista ka ọ na-ejide draịva ahụ, onye ọzọ na-agbakwa ebe na-agba agba. Agụrụ m ndị ọrụ 5 ọzọ gbakwunyere n'ụzọ nkịtị na-eme ihe ọ bụla. Mgbe m natara ihe ọ drinkụ myụ m, agara m na tebụl ma ọ dị ka ọ ehichapụbeghị n'ọtụtụ awa. Enwere mpempe ahịhịa na akwa nhicha nke na-ekpofu ala n'etiti akara ngosi. Ana m asụ ude wee pụọ n'èzí ebe m were foto a ma kesaa ya na Twitter.
@IGIHE ụlọ ahịa a ruru unyi. N'ime, n'èzí, ime ụlọ ịwụ ahụ, ihe niile. Na ụyọkọ ndị ọrụ guzo gburugburu. pic.twitter.com/gFFxKEya46
- Douglas Karr (@onyedikachi_) December 27, 2015
Enwetaghị m nzaghachi, mana onye na-eso ụzọ ọzọ batara ma jụọ ebe Starbucks dị… yabụ azara m ya ma tinye Starbucks.
@IGIHE @IGIHE A-75 m na McDonough, GA. Ime ụlọ ịwụ ahụ karịrị ịse foto.
Ihe mbụ m dere bụ na 2: 11PM. Starbucks mechara zaghachi na 4: 09 PM:
@onyedikachi_ Anyị na-echegbu onwe - biko tinye nkọwa email na twittercustomerservice@starbucks.com w / ụlọ ahịa Ama: https://t.co/osOKugph5J. Mgbaghara.
- Enyemaka Starbucks (@starbuckshelp) December 27, 2015
Ug. Ọ dịghị mgbe m zara.
Ikekwe n'oge ezumike, Starbucks ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi nọ na-arụsi ọrụ ike ị paya ntị na tweet m. Ọ bụ naanị otu tweet, nri? Ọfọn, ụdị. N’ime ndị niile bịara n’ụlọ ahịa ahụ rụrụ arụ n’ụbọchị ahụ, ọ bụ naanị m gwara ha otu nsogbu?
Ole ndị na-abụghị Buckees batara wee pụọ n'ụlọ ahịa a dị ka echiche mbụ ha? Otutu ndi n’eso uzo m nwere okwukwe n’amaghi ama ha huru. Mmadu ole n'ime ha na-acho ulo ahia ndi ozo nke ozo karie Starbucks n'ihi na enwere nsogbu nke ulo ahia ha mara nma? Amaara m na agaghị m aga ụlọ ahịa ahụ n'oge ọ bụla.
Nke a bụ ihe m gaara achọ ịhụ na Tweet si Starbucks:
Anyị na-echegbu onwe anyị, a na-akpọ onye njikwa ụlọ ahịa. DM m ka anyi meere gi ya. Jason
Ọ gaghị esiri ike ịchọta ụlọ ahịa ahụ, ịnwere ike iji ngwa Starbucks ma ọ bụ ebe nchekwa ụlọ ahịa ha:
Maka Starbucks na ụlọ ọrụ ọ bụla na-enyocha mgbasa ozi mmekọrịta, lee ihe mmụta:
Response Oge - Dịka m nọ ọdụ na Starbucks, ọ gaara abụ nnukwu na ị nweta nzaghachi. Mgbe awa abụọ gachara gosiri m na ha achọghị ịma.
Ike mmanye - Ndi gị na-elekọta mmadụ media mmadụ n'ezie jụrụ me iji zitere mmadụ ozi? Kedu ihe kpatara na enyereghị gị ike ịkpọtụrụ onye njikwa ụlọ ahịa ahụ n'onwe gị?
Wepụ - Ọ naghị ekwe omume mgbe niile maka ụlọ ọrụ imezi ihe mejọrọ, mana ha nwere ike belata okwu a site n’igosi ụfọdụ ekele. Inye m kredit na kaadị Starbucks m gaara adị mma.
Hazie - Anyị niile kpọrọ asị ụdị. Ọ ga-abụ ihe na-eme m na nke onwe m iji aha gị banye (naanị m chere aha).
M ka bụ onye ofufe Starbucks ma nwee olile anya na ha ga-ege ntị na nzaghachi a ma melite usoro nlekota mmekọrịta ha.
Tags: Social Media Marketingnlekota oru mgbasa ozinzaghachi mgbasa ozinlekota orustarbuckskpakpando na-elekọta mmadụTwitter